ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच वार्ता, अब के हुन्छ ? – Himshikharnews.com
ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच वार्ता, अब के हुन्छ ?
१९ जेष्ठ २०७६, आईतवार १६:५८
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज पार्टी एकताको विषयमा निर्णायक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पनि सहभागिता थियो ।
स्रोतकाअनुसार प्रचण्डसँग छलफल गर्नुपुर्व ओलीले नेता नेपालसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डसहितको छलफलमा ओली जुटेका थिए । करिब तीन घण्टा भएको छलफलमा पार्टी एकतालाई तत्काल टुँगो लगाउने समझदारी भएको छ ।
शीर्ष नेताहरुबीचको विवादका कारण सचिवालय बैठक केही दिन ढिला सारिएको थियो । सचिवालय बैठक अब भोलि विहान बस्ने बुझिएको छ । नेता त्रयबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै एक नेताले भने,‘आजको बालुवाटारमा भएको छलफलमा उहाँहरुबीच समग्रमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । उहाँहरु सहमति पालना गर्दै मिलेर जाने कुरा भएको छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र ओलीले सरकारको नेतृत्व आलोपालो चलाउने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तरंगलाई मध्यनजर गर्दै ओलीले आजको छलफल डाकेको बुझिएको छ । पत्रकार ऋषि धमलासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफू र ओलीबीच सरकारको नेतृत्वपनि आलोपालो चलाउने सहमति भएको खुलासा गरेका थिए ।रिपोर्टर्सनेपाल डटकमबाट